KANOW FIQI MA TAHAY?
Posted to the Web May 08, 2002
SHEEKADAAN WAXAAN CURIYEY, MARKII HIYIGA LAGU HAYEY IN LOO QALAB QAATO, SHIRKII DIBUHESHIISIINTA SOOMAALIDA EE JABUUTI, LAAKIINSE AYSAN CIDINA WELI TEGIN. WAA SAADAASHAYDII IYO ODOROSKII AAN MALEYNAYEY IN WAX LOO AGAASIMI DOONO SIDA SHEEKADU U DHACAYSO.
Waxay ku bilaabantay sheekadu sidan:
Waxaa haasaawe iyo shukaansi dhexmaray, Abeeso iyo Dabagaalle. Muddo markii ay isla gorfeeyeen sidii ay aqal u wada yagleeli lahaayeen, ayaa Abeesadii tiri; "War bal orodoo qaalli isukeen meheriya inoo raadi." Dabagaalle hadal kama soocelin. Wuxuu bilaabay in uu hadba cidduu arko inta is ag-dhakooliyo, ku yiraahdo: "Kanow fiqi ma tahay?" Wuxuu hadba meel jilbo joogsado, goor uu Seylac sii weydaaranayo, ayuu wuxuu ku soo ku soo beegmay jees meel cidla ah oo gole colaadeed ah deggen, xoolana xayn ari ah iyo awr duq ah ka haysta.
Nin oday ah ayaa qaabilay oo meel geed duggiis ah gogol u dhigay. Dabagaalihii wuxuu uga sheekeeyey odayga, arrinta uu u soo safray, iyo in laga soo bilaabo Raas-kambooni ilaa Raas-caseyr uu cid dhexdhexaad ah oo uu walaayadda u dhiibto ka waayey.
Fiqi-ilkaqor si niyadsami ah ayuu ku qaabilay, arrintii oo isla markiiba martiqaad buu sameeyey, si labada cidood ee Abeeso iyo dabagaallaba goobjoog u ahaadaan. Waxaa la guda galay howshii meherka iyadoo loo kala afti qaadayo.
Fiqi-ilkaqor: "Ma aqbashay Dabagaalloow in aan adiga iyo Abeeso isu kiin mehersho?"
Dabagaalle: "Haa, haddii ay axdiga iyo ammaanada ilaalinayso."
Fiqi-ilkaqor: "Abeeso, raalli ma ka tahay arrintaas?"
Abeeso: "Waxba kama qabo, haddii uu isla weynida iyo santaagga ka tanaasulayo."
Fiqi-ilkaqor: "Waa immisa meherkaagu haddaba, Abeeso?"
Abeeso: "Waa afkeyga muggiis keliya, Fiqiyow."
Fiqi-ilkaqor: "Maxaad ka leedahay qiimaha meherka, Dabagaallow?"
Dabagaalle: "Maa caleesh, waxba kuma jabna." Show wuxuu is yiri, labo xabboo quulle ah ayaa ku filan Abeeso. Dabagaallihii oo hadalka sii wata ayaa yiri: " Fiqi, bal faataxada noogu mar, in reerku noo barakoobo, hawshan Rabbi noo fududeeyo, dhibka iyo barakacana qoysku ka soo kabto."
Fiqi-ilkaqor: "waadh diinta UN-ta baan isugu kiin meherinayaa maaha?"
Dabagaalle: Oo meeday teennii?
Fiqi-ilkaqor: Idinkuba is weydiiya, fannaaniintii waaberi meeye hal qasiido ha ugu dhufteene?
Abeeso: "Ar iskaa daa wuxuu doono ha akhriyee."
Qabbiltu iyo galab-carraaba ayaa lagu soo kala dhaqaaqay. Guri alool iyo ilxir lagu gadaamay, meelkastana laga gufeeyey, feynuuskuna ka bakhtiisan yahay oon deriskiisu dabka kala qaadan, dhaankuna seddex subaxle yahay, ayaa arooskii loo gangaamay. Abeeso jarriidkay ka qosleeysaa. Waxay isleedahay cid kaa nasiib badani ma jirto, mar haddii Rabbi calaf kuugu daray nin gob ah oo reer magac leh ka dhashay, ragannimadiisa iyo sumcaddiisa dal iyo dibedba caanka tahay.
Dabagaalle talaa ku caddaatay, meel uu ka noqdana ma joogo. Doobnimo iyo dibadaa wareeg horuu uga soo daalay, Abeesana wax la dugsado maaha. Abeeso waa is goleeysay. Cillaan bay isku dhoobtay. Garraarkay iska gooysay oo dabadeed is golxaysay. Waxaa bilaabamay xilligii la isu xamxamleyn lahaa oo la is xoodaamin lahaa, balse taasi ma dhicin oo dood iyo in lakala shakiyo ayaa durba bilaabantay.
Abeeso: "Gacaliye, gaaf wareegga iska daa oo geyraha iy gabadanada dhaxanta ka soo gal."
Dabagaalle: "Horta Abeeso aan wax ku weydiiyee, adiga iyo qaalliga ma wax baa isu kiin galay? Maxaadse wadaagtaan?"
Abeeso: "Maxaad ku keentay hadalkaas?"
Dabagaalle: "Foolashiisa sarriigan iyo ilkahaaga sariiran baan isku soo sinji soocay."
Abeeso: "Arrimahaani waa wax guyaal kaa weyne, aynu Dabagaallow howshii wada noolaansheheenna iyo danteenna ka hadalno."
Dabagaallihii isagoo iska wareersan oo labalaboodinaya, ayuu goor subaxnimo ah, abeesoo hurdo ka kacday oo afkii labo taako ka kala dhigeysa arkay. Wadnihii baa istaagi gaaray. Go'aan degdeg ah ayuu wuxuu ku gaaray in uusan waligiis Abeeso agteeda tegin, haddii kunna ku gaaloobayso kunna ku muslimeyso.
Markii caruusaddii ay aragtay in wiilkii meermeerayo ayey istiri bal adna tabahaagii la soo kala bax. Si haddaba ay uga gungaarto yoolkeedii ma rabto in ay durba si kulul u waajahdo barbaarka.
Abeeso: "Maxaa geedka dushiisa ku saaray? Maad halkaan isku soo kala bixisid?"
Dabagaalle: "Abeeso, hadda wixii ka dambeeya aniga iyo adigu dushaas uun baan iska qabaynaa."
Abeeso: "Oo maxaa ku beddelay? Sow inaan aqal wada galno iskuma aynaan ogeyn? Sida aad la socotana maal iyo kharaj badan baa iiga baxay, safarkii lagu baadi goobayey aqal wadagalkeenna".
Dabagaalle: "Abeeso, ciiddii Ilaahay baa ku deeqi weyday, anna habarteed bay ka tahay in aanan naftayda kugu aaminayn, ee haddaba sidaas ku calool fayooboow, inaan dushaas reer dhaqan ka ahaanno oon qofkeenna qofka kale u soo dhawaan, ayaa go'aan inoo ah."
Abeeso: Oo maxaad iiga dideysaa? Ma kufkaa baanan ahayn?
Dabagaalle: "Afkaaga iyo abuuristaada ayaan kaa diday ee sidaas raalli ku ahow."
Waxaa lagu soo afjaray taladii, in reerka la wada dhaqdo, si aan cadow kale uga faa'iideeysan god daloolladooda, aanse marnaba dab lawada kulaalin, golana lagu wada caweyn, inta Abeeso iyo dirkeeda wax ka dhaqan yihiin.
Intiisan iyo Akhris wacan!
Abdinur Aden Farah